CLMV နိုင်ငံတွေကို စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက်တာကြောင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ဝင်ရောက်မှု ထိုင်း လျော့ကျနိုင် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း CLMV နိုင်ငံတွေကို စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက်တာကြောင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ဝင်ရောက်မှု ထိုင်း လျော့ကျနိုင်
epa05176044 (FILE) A file picture dated 10 November 2015 shows foreign tourists flocking to view the sunset at Shwesandaw Pagoda in Bagan city, Myanmar. The Shwesandaw Pagoda was built in 1057 by King Anawrahta. The pagoda is one of the famous tourist attraction to view sunset and sunrise. According to media reports, the government of Myanmar has announced on 23 February 2016 that tourist will be banned from clambering over its distinctive landscape of thousands of pagodas in ancient Bagan city, one of the world's top travel destinations. State-media reported that the Ministry of Culture, starting on 01 March 2016, would ban tourists from visit to top of any monuments of Bagan following the concerns to the durability of the ancient temples and pagodas. The ban would have big impact on the tourism industry, said the chairman of Tourist Guides Association in Bagan Zone. Tourism business operators in Bagan demanded the government to reconsider its decision, and suggested to allow tourists to climb over the pagodas and temples that are still strong enough. EPA/RUNGROJ YONGRIT
CLMV နိုင်ငံတွေကို စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက်တာကြောင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား ဝင်ရောက်မှု ထိုင်း လျော့ကျနိုင်
လေကြောင်းလိုင်းတွေ တိုးချဲ့နေကြပြီး CLMV နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မြန်မာနဲ့ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတွေကို တိုက်ရိုက် သွားနေနိုင်ပြီဖြစ်တာကြောင့် ထိုင်းဟာ အနာဂတ်မှာ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည် ဝင်ရောက်မှု လျော့ကျတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ – RUNGROJ YONGRIT/EPA
ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားတွေအကြား မဲခေါင်ဒေသ နိုင်ငံတွေဟာ စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက်နေပြီး လေကြောင်းလိုင်းတွေလည်း ပိုမိုရှိလာနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးကွက်ရဲ့ တောင်ဆိုမှုအရ တန်ဖိုးသင့်၊ ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ လေကြောင်းလိုင်းတွေကို အိန္ဒိယ၊ စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသနဲ့ တရုတ်တို့က လမ်းကြောင်းသစ်တွေ ဖွင့်ပြီး CLMV နိုင်ငံတွေကို တိုးချဲ့ ပြေးဆွဲလာနေကြပါပြီ။
CLMV နိုင်ငံက အာဏာပိုင်တွေက ခရီးသွားလုပ်ငန်း တိုးတက်ရေး လုပ်ဆောင်နေကြရာမှာ ကမ္ဘောဒီးယားက ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်၊ မြန်မာက တံခါးဖွင့်နိုင်ငံအသစ်၊ လာအိုက ခရီးစဉ်နဲ့ လည်ပတ်မှု၊ ဗီယက်နမ်က ဇိမ်ခံသင်္ဘောတွေနဲ့ လှည့်လည်မှု၊ ထိုင်းကတော့ မြို့ပြယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အစားအစာတို့နဲ့ ဆွဲဆောင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleရုရှားမှာ ကျင်းပမယ့် တိုက်ကြီးများဖလားပွဲမှာ လုံခြုံရေး တင်းကြပ်မယ်
Next articleအမေရိကန် သမ္မတရဲ့ သမက် စုံစမ်းစစ်ဆေးခံနေရ